Raw Methyltrienolone powder (965-93-5) hplc = 98% | AASraw Fat Loss
/ Products / Fat Kurasikirwa poda / Methyltrienolone upfu
Rating: SKU: 965-93-5. Category: Fat Kurasikirwa poda
MUTSVENE unobatanidzwa uye unokwanisa kugadzira kubva ku gram kusvika mukuraira kweMethyltrienolone powder (965-93-5), pasi peCGMP mutemo uye nehutsika hwehutano hwekutonga.
Methyltrienolone powder inogona kuvawo yakasimba uyerorogen receptor binder yezvose steroid. Methyltrienolone inoda madhidiki maduku kuti aone hukuru hukuru mukukura uye simba. Methyltrienolone haina kutendeukira kune estrogen, asi ine progestational basa iyo inogona kuwedzera migumisiro yesrogen.
Methyltrienolone powder zvinhu Characters
Name: Methyltrienolone powder
Molecular Kurema: 284.39
Color: Chiedza chine kristalline powder
Raw Metriltrienolone kushandiswa kweupfu mu steroid cycle
Methyltrienolone powder inonziwo Metribolone (CAS 965-93-5), MT.
Raw Methyltrienolone Ushumiri hwekushandisa
0.5 milligrams (mgs) kusvika ku5mgs zuva nezuva kupatsanurwa, kwete kupfuura 3 kusvika kwemavhiki masere 4 anoshandiswa.
Warning on Methyltrienolone powder
Methyltrienolone poda yakakosha uye androgenic uye inogona kukonzera kusuruvara kwevhudzi uye yakaoma acne kune avo vanogona kuita izvi. Pane imwe njodzi yegynecomastia nemhaka yeprogesational effect ye Methyltrienolone powder powder. Chinonyanya kunetseka neMethyltrienolone poda yakasvibiswa zvichida chiropa chekutyisa.
Methyltrienolone powdhari (MT) inovaka musimba uye inopisa mafuta. Uye steroid iyo inosungirirana zvakasimba kuA AR inokurudzira hutundu hwakawanda hwehutano uye hunopisa mafuta mazhinji. Asi iyo ine simba, inotyisa, isina-aromatizing steroid.
Zvekurongeka kukuru (Mukati me1kg) zvinogona kutumirwa mumazuva matatu ekushanda mushure mekubhadhara.
Nzira yekutenga Methyltrienolone powder (CAS 965-93-5) kubva kuAASraw